चलाउन नआउने दयाहाङ - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः कार्तिक १२, २०७४ - साप्ताहिक
चलाउन नआउने दयाहाङ
चलचित्रको एक ‘पर्फेक्ट हिरो’मा हुनुपर्ने गुण के–के होला ? प्रभावशाली व्यक्तित्व, हँसिलो मुहार, सुगठित शरीर, अग्लो कद, राम्रो अभिनय क्षमता, नृत्य एवं द्वन्द्वकलाको ज्ञान तथा स्टाइलिस । नेपाली चलचित्रका चल्तीका अभिनेता दयाहाङ राईसँग यीमध्ये कुन–कुन गुण छन् ? उनको व्यक्तित्व प्रभावशाली छ, मुहार हसिलो छ । यद्यपि शरीर सुगठित छैन, नत कद अग्लो नै छ । रंगमञ्चबाट फड्को मारेका र पात्रलाई जीवन्त बनाउने उनको क्षमताका कारण न उनको शरीर नै हेरिन्छ, न त कद नै ।
हिरोहरूलाई पो चाहिन्छ त कद र शरीर, दयाहाङ त अभिनेता हुन् । हरेक चलचित्रमा उस्तै लाग्ने संवाद र अभिनय गरे पनि दयाहाङ राई दर्शकहरूबाट रुचाइएका अभिनेता हुन् । दयाहाङ अचेल नृत्य पनि गर्न थालेका छन् भने उनी गोरु जुधाई द्वन्द्व गर्न समेत सक्षम छन् । स्टाइलिसको सवालमा दयाहाङ राई ल्याङफ्याङ नै छन् ।
अभिनेतामा अर्को एउटा गुण पनि भए राम्रो मानिन्छ, त्यो हो ड्राइभिङ । दयाहाङले अहिलेसम्म सवारी चालकको अनुमतिपत्र लिएका छन् कि छैनन् थाहा भएन, तर उनलाई गाडी वा बाइक चलाउन आउँदैन । हुन त यसै पनि व्यस्तता बढेकै छ, कमाएकै छन् भने दयाहाङले त्यस्तो ज्ञान किन लिनु पर्‍यो र ?